ခဏရုန်းထွက်ပါ – Live the Dream
ဆောင်းပါး နှင့် သတင်းများ ,ပညာရေး
ခုခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ယူတာတွေ များပြားနေမှာသေချာပါတယ်။ အချိန်တိုင်းမှာအရာရာကို အမြဲ သင်ယူနေရမယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ သင်ယူတဲ့ အရာတွေကို ခဏနား လိုက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ့်သတ်တမ်း ရဲ့ တစ်ဝက် လောက်သော အချိန်တွေက သင်ယူနေရတဲ့ အချိန်တွေပါ။ ဒီအချိန်တွေပေး ပြီးသင်ယူခဲ့တဲ့ အရာတွေ ကို ပြန်ပြီး သုံးသပ် (evaluate) ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ အားလပ်ချိန်တစ်ရက်ရက် ဘဲဖြစ်ဖြစ် သီးသန့်တစ်ရက်ထားပြီးတော့ဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်ယူတဲ့ အရာတွေကနေ ခဏ ရုန်းထွက်ကြည့်ပါ။
ကျွန်မတို့လူငယ်တွေ အဓိက လိုအပ်နေတဲ့အရာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေ၊ ဖြစ်သင့်တဲ့ အရာတွေ ကို ပိုမိုတွေးခေါ် နိုင်ဖို့ပါ။ သင်အခု အတန်းပညာတွေ သင်နေလား၊ သက်မွေး ပညာတွေ သင်နေလား? တစ်ကိုယ်ရည် တိုးတတ်မှု သင်တန်းတွေ တတ်နေလား? ဒါတွေ အားလုံးဆီကနေ ခဏလောက် ရုန်းထွက်ပြီး တစ်ရက်တာလုံး ဘာမှ မသင်ယူ ဘဲနဲ့ အနားယူ ကြည့်ပါ။ တွေးကြည့်ပါ။ သင်ယူနေတာတွေက ဘာတွေလဲ။
အခုသင်ယူနေတဲ့အရာတွေက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက် အသုံးဝင်နေလဲ။ အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်ယူတဲ့အချိန်တွေကို ခဏ ရပ်တန့်ပြီးနားလိုက်တာက သင့်ကို အတွေးခေါ်ကောင်းတွေ၊ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆင်ခြင်မှုတွေကို ရစေမှာပါ။ သင်ယူရမှာ တွေက အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ယူခဲ့တာတွေကို ဘဝရှေ့လျောက်မှာ တကယ်အသုံးဝင်အောင် အသုံးချနိုင်ဖို့က ကိုယ့်ရဲ့ ပါးနပ်မှုပါ။ ဒါကြောင့်သင်ယူတာတွေကို တကယ် အသုံးချပြီး အဖိုးတန်တဲ့ အတွေးခေါ်တွေ ရဖို့ အတွက် ခေါင်းရှင်းပြီး တွေးခေါ်တဲ့ အချိန်လေးထားပေးပါ။ တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ အကျင့်လေးဖြစ်မှာပါ။